कात्तिकमा चु’ नाव गराउने ओलीको योजनामा देउवा तयार भएकै हुन् त ? भर्खरै आयो यस्तो सुचना |
कात्तिकमा चु’ नाव गराउने ओलीको योजनामा देउवा तयार भएकै हुन् त ? भर्खरै आयो यस्तो सुचना
वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदै छन् ।
ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने धम्की दिएका कुनै पनि विपक्षीले यो आँट नगरेपछि गतिरोध फुकाउन भन्दै ओली आफै अघि सरेका हुन् ।
ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण विपक्षीहरुबीच नयाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा एकमत नहुनु हो ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेको असन्तुष्ट खेमाका नेता माधव नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रस्ताव गरे पनि जनता समाजवादी पार्टीमा एक मत देखिएको छैन ।
जसपामा केही समय बाबुराम भट्टराईले आफ्नै लागि पहल गरेका थिए भने प्रचण्डले महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका कारण उनको पनि महत्त्वाकांक्षा बढेको छ ।
त्यसपछि जसपाको आन्तरिक विग्रहका कारण पनि कुन पक्षमा पल्लाभारी हुन्छ भन्ने यकिन छैन । प्रचण्ड र देउवाका बीचमा हुने एक–एक वर्षको आलोपालोको सहमतिमा जसपाका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टर्राइ फड्के किनाराका साक्षी बन्छन् कि बन्दैनन् भन्ने अर्को प्रश्न छ ।
विपक्षी गठबन्धनको यही कमजोरीमा टेकेर ओलीले विश्वासको मत लिने पस्ताव अघि बघि बढाएका हुन् । अब उनले बहुमत पाउने सम्भावना कमै छ ।
उनकै दलको असन्तुष्ट खेमा माधव नेपाल पक्षधरले ओलीलाई मत नदिने भएकाले ओली अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । त्यसैले अब ओलीको जोड नयाँ गठबन्धन बन्न नदिनेमा केन्द्रित हुनेछ ।
हुन त संविधान धारा ७६ (२) बमोजिमका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले २७ गते विश्वासको मत पाएनन् भने सोही दिन राष्ट्रपतिबाट संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा धारा ७३ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
विपक्षी गठबन्धनको कसरत गरिरहेकाहरुको मुख्य आशंका पनि यही छ । तर, ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने एउटै दलको बहुमत पुग्ने अवस्था नहुँदा पुनः धारा ७६ (२) बमोजिम गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि आह्वान भएमा देउवा वा विपक्षी गठबन्धनले अघि सारेको उम्मेदवार प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था छ ।
यसरी गठबन्धन सरकार बन्यो भने सबैभन्दा प्रबल सम्भावना देउवा नेतृत्वको सरकार हो । तर, देउवाले भने सत्तामा भन्दा चुनावतिर बढी झुकाव देखाएका छन् ।
अहिले सत्तातिर लाग्दा महाधिवेशन प्रभावित हुने र पार्टीमा पकड गुम्ने जोखिम उनले देखेका छन् । पार्टीमा भदौभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता कारण पनि देउवा चेपुवामा छन् ।
अहिले पनि देउवा र ओलीबीच शीघ्र निर्वाचनमा अनौपचारिक सहमति बनेको देखिन्छ । ओलीले विश्वासको मत नपाउने र नयाँ गठबन्धन सरकार नबन्ने अवस्था भनेको मध्यावधि चुनाव घोषणाका लागि पुनः स्थिति परिपक्व बन्नु हो । गत पुस ५ मा चुनाव घोषणा गरेको ओलीका निम्ति उक्त कदम ठीक थियो भनेर देखाउन पनि फेरि चुनाव घोषणा गर्ने उपयुक्त अवसर हो ।
आगामी कात्तिकमा चुनाव गराउनेमा ओली र देउवाबीच झण्डै एकमत देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले पनि त्यसैअनुरुप तयारी अघि बढाएको छ ।
ओली र उनका समर्थकहरुले त भित्रभित्रै आफूलाई भोट हाल्न सक्ने जमातलाई मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने अभियान नै चलाएका छन् । यही कुराको सुइँको पाएर केही दिनअघि निर्वाचन आयोगका एक पूर्वपदाधिकामरीले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न फेसबुकमा एउटा लामो स्टाटस नै लेखेका थिए ।
देउवाले भने के बुझ्न जरुरी छ भने ओलीको नेतृत्वमा हुने चुनाव कांग्रेसले सोचेजस्तो निष्पक्ष नहुन सक्छ । ओलीले सत्ता र शक्तिको उपयोग कुन हदसम्म गर्न सक्छन् भन्ने कुरा पछिल्लो एकाध वर्षलाई नियाल्दा पुग्छ ।
ओलीले राज्यका सबै निकायमा आफ्नो उपस्थिति र पकड आगामी कम्तीमा ६ वर्षसम्मका लागि जमाइसकेका छन् । त्यसैले ओलीसँग चुनाव लड्ने हो भने उनलाई शक्तिच्युत गराउनुमा मात्र देउवाको भलाइ छ ।
ओलीवि’ रुद्ध उनकै पार्टीको ठूलो पंक्ति लागिरहेका बेला विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्न पाउने यस्तो अवसर फेरि आउँछ नै भन्ने ठेगान पनि छैन ।
आउँदो चुनावमा कांग्रेसको एकल बहुमत आएन र ओली हाराहारीका शक्ति बनेर उदाए भने दोस्रो वा तेस्रो ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । त्यतिखेर देउवा फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएर बस्नुपर्नेछ ।
यसकारण पनि देउवाले अहिले सामुन्ने आएको अवसर उपयोग गर्नुपर्छ । पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नेपाल पत्रकार महासंघले जस्तै भौतिक रुपमा भेला हुनु नपर्ने गरी संक्षिप्त प्रक्रियाबाट महाधिवेशनको औपचारिकता पूरा गर्नुपर्छ र अहिलेकै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
पार्टीभित्रका समस्या मिलाएर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि एक वर्ष राम्रोसँग सरकार चलाएर अर्को वर्ष चुनाव घोषणा गर्दा लोकतान्त्रिक संस्था, प्रक्रिया र कांग्रेस सबै जोगिनेछन् ।